Nzọụkwụ 10 maka Iwulite Mmemme Nkwado Nlekọta Ndị Nlekọta Mmadụ | Martech Zone
Nzọụkwụ 10 iji wulite Mmemme Nkwado Ndị Na-ahụ Maka Ọrụ Na-arụ Ọrụ nke Ọma
Friday, July 28, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na nnukwu ụlọ ọrụ na-enwekarị ego na-ebuwanye ibu ma nwee ike ịzụta visibiliti na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ na-eju m anya na ụlọ ọrụ ole na ole na-ewe ike nke ndị ọrụ ha iji nyere aka. Anyị nwere oke mkparịta ụka banyere nke a Amy Heiss nke Dell, bụ ndị jere ije site na nsonaazụ dị ịtụnanya òtù ha na-enweta site na ịmepụta usoro ọrụ nkwado mmekọrịta ndị ọrụ.
Ka anyị na-agwa ndị ahịa gbasara ịkwado ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe, m na-ekwugharị akụkọ ọzọ Akara Schaefer ekere òkè banyere otu ụlọ ọrụ mba ụwa nwere ọtụtụ narị puku ndị ọrụ. Mgbe ha bipụtara na soshal midia, ha nwere ole na ole ihe masịrị na retweets. Mark jụrụ (akọwapụtara ya), "Mgbe ndị ọrụ gị enweghị oke oke ịgụ na ịkekọrịta ọdịnaya gị, kedu ka ị chere na atụmanya gị na ndị ahịa na-ele ya?". Ọ bụ a siri ike ajụjụ… ọrụ na-elekọta mmadụ onwe bụghị nanị banyere nkekọrịta, ọ bụkwa banyere ilekọta.
Organizationstù ndị ọzọ m kwurịtara okwu na-ala azụ ịchọta enyemaka nke ndị ọrụ ha, ụfọdụ na-emepe iwu megide ya. Ọ na-emetụ m n'uche na ụlọ ọrụ ga-amachibido onyinye ya dị oke ọnụ ma dị oke ọnụ ma gbochie ha ịkekọrịta ihe ọmụma ha, oke agụụ, ma ọ bụ ọbụlagodi echiche ha. N'ezie, enwere ndị nwere ụlọ ọrụ na-achịkwa nke ọma, mana gosi m ụlọ ọrụ na-achịkwa ma ị ka ga-ahụ mmemme dị irè nke na-arụ ọrụ n'ime nrụgide.
N'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ndị ọrụ na-eche na ọ dịghị ọrụ dịịrị ha iji nyere aka n'ịkwalite ụlọ ọrụ ahụ. N’okwu ndị ahụ, m ga-eleba anya na ọdịbendị nke ụlọ ọrụ ahụ na ụdị ndị ọrụ m na-go ọrụ. Apụghị m iche n’iche goro onye ọrụ na-achọghị ịkwalite ọrụ ha. Apụghị m iche n’echiche ịbụ onye ọrụ ma ghara ịdị mpako ịkwalite mbọ ndị otu m na-agba.
ọrụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa ugbu a na mbọ ahịa azụmaahịa nke nzukọ. Site na ọnụ ọgụgụ dị nkọ na nchịkwa na mgbasa ozi mgbasa ozi na mmụba dị egwu na ọdịnaya ọdịnaya, agbụrụ a iji dọta uche ndị mmadụ na-asọmpi karịa oge ọ bụla na ndị ọrụ abụrụla akụ dị mkpa dị ka ndị nnọchi anya mgbasa ozi ọha na eze. N'ezie, otu ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ 20 nwere ihe karịrị mmadụ 200 na netwọkụ ha nwere ike ịmepụta mmụba ugboro anọ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Kedu ihe bụ ịkwado ndị ọrụ na-elekọta mmadụ?
Nkwado ndị na-elekọta mmadụ bụ ịkwalite nzukọ site n'aka ndị ọrụ ya na netwọkụ mgbasa ozi nkeonwe ha.
Nzọụkwụ 10 iji wuo Mmemme Nkwado Ndị Na-ahụ Maka Ọrụ Na-arụ Ọrụ nke Ọma
Kpọọ ndị ọrụ gị iji sonyere mmemme ọhụrụ ị na-akwado gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Mepụta mgbasa ozi mmekọrịta ụkpụrụ nduzi ma kuziere ndi oru ihe banyere omume kachasi nma.
mezue ịnyịnya usoro maka ngwa ọrụ ndị ọrụ ị ga-eji.
Kpebisie ike na ebumnuche azụmahịa gị yana igosi ihe ngosi maka mmemme.
Mepụta nkwupụta ndị ọrụ otu ijikwa mbọ ụlọ ọrụ niile wee họpụta onye nhazi mmemme.
Mwepụta pilot ya na obere ndi oru tupu ha enyefee ya na ndi otu a.
Mezie ma mepee ihe dị iche iche dị ọhụrụ ma dịkwa mkpa content maka ndị ọrụ ịkọrọ ndị na-eso ụzọ ha.
Kpebisie ike na ọ bụrụ na ọdịnaya na izipu ozi ga-adị akwadoro ya site na onye nhazi ihe omume.
Nyochaa mmemme mmemme na ụgwọ ọrụ ndị ọrụ nwere mkpali maka nkwado ha.
Tụọ nloghachi na ntinye ego nke onye ọrụ gị na-agba mbọ site na ịdebe KPI ụfọdụ.
Iji gosipụta mkpa atụmatụ a dị ka nke ọma yana mmetụta, folks na Onye na-elekọta mmadụ emepụta ihe omuma a, Ike nke Ọrụ Social Media Advocacy, nke na-egosi ihe ọ bụ, ihe kpatara ya ji arụ ọrụ, otu o si arụ ọrụ, na nsonaazụ ya maka ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma na mmemme mgbasa ozi ndị ọrụ na-elekọta mmadụ. Jide n'aka na ị gafere iji hụ nnukwu vidiyo na-akọwa ihe Onye na-elekọta mmadụ!
Onye na-elekọta mmadụ bu ihe ndi mmadu na acho ndi mmadu na enyere gi aka ka ha buru ndi n’enye ndi mmadu aka. Mbuli gị na ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ media ọnụnọ, kọwasị ya apụghị iru na-ewu ntụkwasị obi site na-ekere òkè gị otu ịkọrọ na-akwalite ụlọọrụ ọdịnaya. Ndị ọrụ gị bụ ndị nkwado kachasị mma ị nwere ike ịnwe. Ọ bụrụ na ha kwenye, ndị ọzọ ga-agbaso.
Tags: ntinyeọrụ nkwadoọrụ ụgwọ ọrụndị ọrụ na-elekọta mmadụndị ọrụ soshal midia ịkwado mmemmeọrụ na-elekọta mmadụ ụgwọ ọrụ mmemmeotúka esi wuo usoro nkwadomgbasa ozi mgbasa ozionye na-elekọta mmadụihekedu ihe bụ njimara mmadụ gbasara ọhaneze
Ndi America na onye isi oche Jeremy Bloom na-ekwukọ ọnụ
Streamingkpụrụ gụgharia Live na Statistics